Fomba ahazoana lisansa cannabis - Mpanolotsaina Canna amin'ny fangatahana mandresy
Fomba ahazoana lisansa cannabis miaraka amin'ireo mpanolotsaina Canna
Te-hahazo fahazoan-dàlana cannabis?
Ahoana no fomba ahazoako fahazoan-dàlana cannabis?
Fotoam-pampianarana ao Illinois io ary mahery ny fifaninanana! Amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana 75 ihany no manome, ny teboka rehetra ao amin'ny fampiharana iray. Ny fangatahana fahazoan-dàlana dia lafo, mifaninana ary matetika ny fotoana iray. Tamin'ity herinandro ity dia niaraka tamin'ny manam-pahaizana i Jay Czarkowski, mpanorina Partner any amin'i Miggy sy Tom Mpanolotsaina Canna, hiresahana momba izay tena ilain'ny fananana mahomby. Canna Advisors dia manana tantara tsy ampoizina amin'ny famokarana rindranasa ho an'ny mpanjifany. Ianaro izay mahatonga ny fangatahana mandresy amin'ity andiany herinandro ity:
Inona no atao hoe Mpanolotsaina Canna?
Masoivoho ivon-toeram-pitsaboana cannabis manampahaizana manokana momba ny fampandrosoana sy ny fangatahana fahazoan-dàlana
Nandresy ireo fangatahana tany amin'ny fanjakana 29 ary koa ny Guam, Puerto Rico, ary Canada
Natsangan'i Diane sy i Jay Czarkowski tamin'ny 2013
Mandeha any Boulder, Colorado
Inona ny serivisy omen'ny mpanolotsaina omena?
Fitomboana sy fanatsarana
Maninona ianao no mila mpanolo-tsaina
Lafo ny fampiharana iray, ny fangatahana rihana iray dia mety ho an'arivony tapitrisa dolara
Ny tontolon'ny tanety dia tena mifaninana
Be pitsiny ny fampiharana
Ny mpanolo-tsaina toy ny Canna Advisors dia manana ny traikefa sy ny fahaiza-manao
Dingana fanombohana hampitomboana ny fahafahanao manangona fahazoan-dàlana
Mitaiza fananana feno
Fenoy ny anjara asan'ny mpiasa
Manàna modely ara-bola matanjaka misy vola
Ny fananana ekipa iray natokana ho amin'ny fahombiazan'ny orinasa sy ny fampiharana anao dia mety hampitombo ny mety ahazoana ny fangatahana fampiharana. Ny fampiharana dia lafo, voahaingo ary sarotra be. Ny ekipa iray natokana hametrahana ny orinasam-bary ho an'ny fahombiazana dia afaka manao fahagagana amin'ny fampiharana iray.